HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်2020 2020 အစ္စတန်ဘူလ်, Mega သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်အိုလံပစ်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း
19 / 02 / 2012 Levent Ozen 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လောက, အထွေထွေ, တူရကီ 0
MARMARAY: 2013 တစ်နှစ်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားအောက်မှာနှစ်ဘက်အားဖြင့်စီမံကိန်းရဲ့အဆုံးမှာဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ယင်းမက်ထရို၏အလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်. အစ္စတန်ဘူလ်ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများအတွက်အသွားအလာပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 1.5 လူဦးရေသန်း, စီမံကိန်းနှစ်ဘက်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။
wheel Tube: 2015 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းဖို့မျှော်လင့်စီမံကိနျး၏အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပင်လယ်၏အောက်ဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးကားများနှင့်ဗင်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်စည်းလုံးညီညွတ်ပါလိမ့်မယ်။ တောင်ဘက်တံတား၏ဖြတ်ကူးနှစ်ခုပြွန်တစ်နေ့လျှင် 90 တထောင်မော်တော်ယာဉ်များကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်ထားလိမ့်မည်။
တံတားများနှင့်မြောက်ပိုင်း Marmara ကားလမ်း: တင်ဒါဧပြီလကျင်းပစေမည်အကြောင်း, စီမံကိန်းတွင်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ third-ကီလိုမီတာတံတားနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းများ 95 "လုပ်ကိုင်ရန်-လွှဲပြောင်း, Build" မော်ဒယ်နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ 300 ကီလိုမီတာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်အများပြည်သူရန်ပုံငွေနှင့်အတူတညျဆောကျပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်တတိယတံတား၏အကူးအပြောင်း၏သဘောပေါက်နှင့်သင်၏အသက်ရှုယူပါလိမ့်မယ်။
ဝန်ဆောင်မှုသို့စီမံချက်၏ဒုတိယအဆင့်ဆက်လက်တည်ဆောက်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီ-Eskisehir အစိတ်အပိုင်း။ တစ်ပြိုင်နက်စီမံကိန်းကိုနှစ်ခုမြို့ကြီးများအကြားယခုနှစ် 2013 ခရီးသွားအချိန်အကုန်ပြီးစီးလိမ့်မည် Marmaray'l သုံးနာရီသို့လျှော့ချလိမ့်မည်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်-Edirne စီမံကိန်း၏တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်သည့် Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းယခုနှစ် 2020 အားဖြင့်ပြီးစီးဘို့စီစဉ်ထားသည်။
တတိယ AIRPORT: အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယလေဆိပ်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးလေဆိပ်များတွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ 60 လေဆိပ်နှစ်စဉ်ခရီးသည်စွမ်းရည် 2020 နှစ်ပေါင်းသန်းမတိုင်မီပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်ရပါလိမ့်မယ်။
"Cekmekoy üsküdarümraniye-" အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တင်ဒါဇာတ်စင်, "Bakirkoy Ido ကမ်းခြေ-Bagcilar (Kirazli)", "Alibeyköyကျောက်ခေတ်-Beşiktaş-Mahmutbey" နှင့် "BAKIRKOY Beylikdüzü" မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုပြီးစီးလိမ့်မည်: Metro ။ ။
HAYDARPAŞA: ဤစီမံကိန်းသည် Haydarpasa ရထားဘူတာ၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းဧရိယာများပါဝင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.3 သန်းစတုရန်းသည့် Marina အပေါ်မီတာရွက်လှေကလပ်, ခရုဇ်ဆိပ်ကမ်းများ, ဆေးရုံ, ဟိုတယ်များ, စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ, အိုးအိမ်, စီးပွားရေးစင်တာများ, အားကစားစင်တာများနှင့်ကားတစ်စီးပန်းခြံများတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့။
အရင်းအမြစ်: www.sabah.com.t ဖြစ်ပါသည်
ဝန်ကြီး Suat Kilic, အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ် 2020 ကိုယ်စားလှယ်လောင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများရှိလိမ့်မယ်ဟုပြောသည် 24 / 05 / 2012 လူငယ်နှင့်အားကစားဝန်ကြီး Suat Kilic, အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ် 2020 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြောင့် 2020 ၏အလွယ်ကူဆုံးမြို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကနေလာလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ဝန်ကြီးဓား, Down ရဲ့ syndrome ရောဂါလက်ခံမှုနှင့်အတူအားကစားသမားအနိုင်ရတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပြေးခုံပစ်ချန်ပီယံ, ငွေ, ကြေးဝါတံဆိပ်, စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနကမှာဝန်ခံချက်, ဓားများဘာသာရပ်အပေါ်မေးသော်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း "အစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မြို့ကြောင်းအရှိဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။ ကျနော်တို့အိုလံပစ်အစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံအိုလံပစ်အဘို့အဆင်သင့်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။3။ တံတား, Marmaray နှင့်လွယ်ကူစွာနှင့်အတူမြို့တော်သို့လာ 2020 ဥရောပစီမံကိန်းများကိုရောက်စေဖို့အစ္စတန်ဘူလ်ကနေမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား Channel, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ ထား, ဒါကြောင့်ဝေးအိုလံပစ်အတွက်ဒီနှစ် ...
အိုလံပစ်အဆင်ပြေဘို့ 2020 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က 05 / 09 / 2013 အိုလံပစ်ညာဘက်အဘို့အ 2020 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ: တူရကီရဲ့အမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီ, Buenos Aires ရှိအစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်၌သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြသလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်အိုလံပစ်အိုလံပစ်ရွာ 2020 ကိစ္စတွင်သည်နေရာထိုင်ခင်းစီမံကိနျး၏အစည်းအဝေးတွင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆောင်ပုဒ်အစ္စတန်ဘူလ် 2020 လျာထားစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Hasan Arat အတူဖိတ်ကြားခဲ့သည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ရသော "ကျနော်တို့ကသမိုင်းကိုရေးသားနေကြသည်" အစ္စတန်ဘူလ် 2020 အဆောက်အအမျိုးမျိုးတို့ကိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသူကပြောပါတယ်။ Metrobus, အလင်းရထားလမ်း, လည်ချောင်းပြွန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ရေလက်ကြားနှစ်စဉ်ပိုးလမ်းမကြီးခေါ်ဧရိယာထဲမှာကိုဖန်ဆင်းပြွန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏ကျမ်းပိုဒ်ပြီးနောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကဗီဒီယိုသရုပ်ပြအဖြစ်ဖော်ပြမြေအောက်ရထားအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ ...
အစ္စတန်ဘူလ်အသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့ 2020 ကွန်ယက်ကိုအဖြစ်အိုလံပစ်အထိတည်ဆောက်ခဲ့လိမ့်မည်။ 07 / 03 / 2012 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ကြီးမားသောဖြစ်ရပ်များအဘို့ဤအရေးကြီးသောစည်းမျဉ်းများကျင်းပမည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်ဖို့လျှောက်လွှာ candidacy သူကို 2020 ။ အထူးသဖြင့်အိုလံပစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ... တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုထပ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအရှည် 1.1 ကီလိုမီတာရေလက်ကြားဖြတ်ကူးလမ်း (Eurasia ၏ဆောက်လုပ်ရေးရှိလာအတွက် 9.1 ကီလိုမီတာလမ်းတိုးတက်မှုများနှင့်ရေငုပ်သင်္ဘောမှတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Kazlicesme အဆိုပါGöztepesiနှင့်အတူချိတ်ဆက်မည့်အရေးအပါဆုံးလမ်းကြောင်း Marmaray နှင့်ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း 5.4 ဒေါ်လာဘီလျံ, ဖွစျလိမျ့မညျ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း) ပြီးစီးပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်နေ့သုံးပါလိမ့်မယ်ရေလက်ကြား 800 တထောင်၏မော်တော်ယာဉ်များဖြတ်ကူးဘို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂိမ်းကဒီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားဖို့ဒီဇိုင်းပါလိမ့်မည်။ Marmaray စီမံကိန်းပြီးစီးပါလိမ့်မည်။ ယင်းမက်ထရိုဧရိယာသို့အသွင်ပြောင်းသုံးအိုလံပစ်ခရီးသည်ရထားလမ်းအတွက်သာရရှိနိုင် ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအစိုးရအစီအစဉ်၏ resolution ဟာရှေ့မှောက်သို့ရောက် လာ. 26 / 11 / 2015 , ထိုအစိုးရအဖွဲ့၏အစီအစဉ်ဧရာစီမံကိန်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်ကြွလာကာလအတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်: အကြီးစားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကိုအစိုးရအစီအစဉ်တွင်ထုတ်ရပ်နေ၏။ အစိုးရအစီအစဉ်အရ, ဒီဇိုင်းပြီးစီးခဲ့ပြီးကမ္ဘာပထမဦးဆုံး "အစ္စတန်ဘူလ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း" ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကူးအပြောင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်မြေအောက်ရထားအောက်မှာရှောက်သွားလိမ့်မည်ဟုအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြား3ပုံပြင်။ အစ္စတန်ဘူလ်၌တည်လိမ့်အသစ်ရထားလမ်းလိုင်းများ။ နှစ်ချက်လမ်းကြောင်းအရှည်, 30 တထောင်ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားကွန်ယက်ကို3623 မှတထောင်ကီလိုမီတာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Izmir, Antalya နှင့် Gaziantep သစ်ကိုရထားလမ်းပြီးစီးပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားကြီးမားသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်း3ဇာတ်လမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အစိုးရကအစီအစဉ်ကိုကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းများ၏ခေတ်သစ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဖေဖော်ဝါရီလ 20 1977 အပြာရောင်ရထားအချိန်စတင်ခဲ့သည်။
ဝန်ကြီး Suat Kilic, အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ် 2020 ကိုယ်စားလှယ်လောင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများရှိလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်
အိုလံပစ်အဆင်ပြေဘို့ 2020 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က
အစ္စတန်ဘူလ်အသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့ 2020 ကွန်ယက်ကိုအဖြစ်အိုလံပစ်အထိတည်ဆောက်ခဲ့လိမ့်မည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအစိုးရအစီအစဉ်၏ resolution ဟာရှေ့မှောက်သို့ရောက် လာ.
ကျိကျိတက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများကို 2017 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်İzmirin